04 ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမော်ကွန်းတိုက် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeStore ကိုကဏ္ဍ04 ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
Store ကိုအမျိုးအစား: 04 ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
R ကိုစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc ကဆူညံအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်စက် Tools များ
10 / 02 / 2019 Levent Elmastaş R ကိုစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc ကဆူညံအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်စက် Tools များ အတွက် yorumlar kapalı
1995 R ကိုအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်, မီးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဆီးနှင်းရန်ပွဲဆူညံအော်ဟစ်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ထိုရထားလမ်းနှင့်အထူးကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအရောင်းနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုသိထားသညျ။ တူရကီတစ်mümessilikနေစဉ်ကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ဆန်းသစ်စျေးကွက်တူရိယာများနှင့်စက်ကိရိယာများဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
ဘုံဘိုင်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံလီမိတက် STI ။
09 / 02 / 2019 Levent Elmastaş ဘုံဘိုင်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံလီမိတက် STI ။ အတွက် yorumlar kapalı
ရထားလမ်း superstructure ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများမီးရထားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကိုမီးရထားပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် catenary စနစ်များကိုအချက်ပြခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို Distributorship အလုပ်လုပ်တယ်
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အီလက်ထရောနစ်ဘို့ပါဝါကို yorumlar kapalı
Power ကအီလက်ထရောနစ်စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc က 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကရှေ့ဆက်အချိန်တူရကီအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အကြားဖြစ်ဖို့စီမံထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်သွင်းပို့ချအတွက်၎င်း၏ R & D ကိုယ်ပိုင်နှင့်ဒီဇိုင်းအလုပ်နှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသူ့ဟာသူနှင့်အတူ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတိုးတက်အောင် [ပို ... ]
Nexans တူရကီစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc က
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş Nexans တူရကီစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး Inc က အတွက် yorumlar kapalı
Nexans အုပ်စုနှစ်စဉ်ရောင်းအားအသံအတိုးအကျယ်ဘီလီယံယူရိုတိုင်းပြည်အတွင်း 6, 23.700 န်ထမ်း, ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ 40, 65 ကမ္ဘာ့စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုမတူညီတဲ့ဒေသတွေအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်လေးစားမှုကိုရယူကြသည်။ ထုတ်ကုန်အစုစုအတွက် Nexans ကေဘယ်လ်ကြိုး [ပို ... ]
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အီလက်ထရောနစ်များအတွက် Murr yorumlar kapalı
Murrelektronik သင့်ရဲ့အမြဲတမ်းလက်တွဲဖော်ဖြစ်ပါသည်: ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက်ကနေတက်ကြွစွာသို့မဟုတ် passive အကူးအပြောင်းရှိခြင်းကိုသေချာ။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကျနော်တို့သင်တို့သည်ငါတို့၏ application များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုပူဇော်တဲ့တစ်ခုတည်းသောရင်းမြစ်ကနေစက်မှုဇုန်အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်မှထုတ်ကုန်ဆင်းသက်လာ။ အဆင့်မြင့်ပိုမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကို, စျေးကွက် [ပို ... ]
Angst Pfister အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Solutions
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Solutions များအတွက် Angst Pfister yorumlar kapalı
1982 Angst Pfister အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Solutions ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယင်းသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ရော်ဘာနှင့်တုန်ခါမှု damp Angst Pfister Group မှလက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒြပ်စင်ပိတျထားသော၏အင်ဂျင်နီယာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်။ Angst Pfister အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Solutions, ပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်မှု [ပို ... ]
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş မော်တော်ယာဉ်များအတွက် Koluman yorumlar kapalı
Koluman တစ်နှစ် 1965 လမ်းနှင့်သွင်းကုန်ကိုယ်စားပြုမှု၏လယ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်သွား၏။ ယနေ့တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအပါအဝင်ကျယ်ပြန့်လေယာဉ်အတွက် operating မော်တော်ယာဉ်, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအတွက်အချက်မှာ။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင် Mercedes-Benz, တည်ထောင်ခဲ့ပြီး xnumx't [ပို ... ]
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş Gummi-Welz ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ်ထုတ်ကုန်များအတွက် yorumlar kapalı
ထို့အပြင်မီးရထားကဏ္ဍအထူးတံခါးရော်ဘာတံဆိပ်လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုစနစ်များနှင့်ပစ္စည်းများများအတွက် Gummi-Welz, ထုတ်လုပ်
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အဘို့အ Geomatics န်ဆောင်မှုများ yorumlar kapalı
တူရကီအတွက် GeoMax 's ဖြန့်ချိ, ယနေ့ထုတ်ကုန်များ၏ယခုနှစ် 2008 အကွာအဝေးအတွင်းစတင်ခဲ့သည်သည်အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်တစ်ဦးဦးဆောင်အနေအထားရှိပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းငါတို့ခွန်အားနှင့်ပညာရေး၌အကြှနျုပျတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အရင်းအမြစ်, အရည်အသွေး, ထိရောက်သောနှင့်တိကျမှုရှိပါတယ် [ပို ... ]
GEOCOM အထူးဆီနှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှု။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş GEOCOM အထူးဆီနှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှု။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က အတွက် yorumlar kapalı
GEOCOM အထူးဆီနှင့်စက်မှုထုတ်ကုန်များကုမ္ပဏီ 1992 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ညာဘက်အဘယ်သူသည်Meşrık Ozcin တစ်နှစ် 1992 ဂျာမနီရှိအဆင့်မြင့်ပညာရေးမှကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂလိကရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီနှင့်မုန့်ညက် Lubco ယခုနှစ်ကိုယ်စားပြုမှုမှတူရကီဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ 20 [ပို ... ]
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş နည်းပညာဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ yorumlar kapalı
နည်းပညာဆိုင်ရာ Industries, Ltd STI ။ အဆိုပါ 1961 Abdülhalim Dincer (မက်စ်။ Load ။ Eng-ETH / ဇူးရစ်) ခုနှစ်တွင်တူရကီတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လက်ထက် မှစ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်အချိန်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ, ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးမှအဖွင့်က 55 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ခက်ခဲသည်အခါ, အဓိကအားဖြင့်ကြီးမားသောဥရောပထုတ်လုပ်သူများမှာ [ပို ... ]
08 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အီလက်ထရောနစ်များအတွက်အထွေထွေ Specification yorumlar kapalı
အထွေထွေနည်းပညာအီလက်ထရောနစ် 1987 နှစ်အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တက်ကြွစွာထုတ်ကုန်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကတည်းကလွန်ပြီ။ အမြဲတမ်းစက်မှုအင်ဂျင်နီယာလှုပ်ရှားမှုများ၏ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်သင်bulunmaktır.üs Router ကစွမ်းဆောင်ရည်ယူဆတူရကီအတွက်အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။
07 / 02 / 2019 Levent Elmastaş အိုရန် yorumlar kapalı
Eymak, ဝံ၏အရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောကဏ္ဍတွင်တူရကီနှင့်အတူအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံ 20 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ URB ဝက်ဝံ, ဝက်ဝံနှင့် Ake ဝက်ဝံ FKL အထွေထွေတူရကီနှင့်အတူတူရကီ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကဏ္ဍအားလုံးတွင်အတွက်ကမ္ဘာကြီးအတွင်းတည်ရှိသည် [ပို ... ]
Emas သံ & သံမဏိ
07 / 02 / 2019 Levent Elmastaş သံနှင့်သံမဏိများအတွက် Emas yorumlar kapalı
တူရကီရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အင်အားကားမောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဆောငျရှကျကဏ္ဍများအကြားသူ၏နာမကို print ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်, ပြားချပ်ချပ်နဲ့ပူနွေးတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ribbed သံဘောင်များကိုထုတ်လုပ် 1968 technique ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အရည်အသွေးထုတ်လုပ်မှုမှတဆင့် FFWD, [ပို ... ]
CYF Internationale စက်မှုထုတ်ကုန်များ
07 / 02 / 2019 Levent Elmastaş စက်မှုထုတ်ကုန်များအဘို့ CYF Internationale yorumlar kapalı
ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များအိမ်တံခါးပေါ်တွင်ဤကဏ္ဍ၏ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီမှန်ကန်သောဆုံးနဲ့စီးပွားရေးအရအဖိုးတန်ထုတ်ကုန်တွေကို select လုပ်နိုင်စွမ်းတိုင်ပင်ခြင်းအားဖြင့်ရေကြောင်းနှင့်စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အတူအပြိုင်အတွက် CYF အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ, ထွန်းသစ်စမီးရထား, လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစက်မှု, [ပို ... ]
07 / 02 / 2019 Levent Elmastaş တူရကီအဘို့အတတ်အင်ဂျင်ပါဝါစနစ်များ yorumlar kapalı
တူရကီတတ်အင်ဂျင်ပါဝါစနစ်များအရောင်းဝန်ဆောင်မှု, Ltd. Co. , ။ , တူရကီအတွက်တတ် Inc ကို, တစ်ဦးတည်းသောအခွင့်အာဏာဖြန့်ဖြူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်အပြည့်အဝသူ့ကိုပိုင်တပ်ဆင်ထားအားလုံးသော။
07 / 02 / 2019 Levent Elmastaş နည်းပညာအဘို့အ Arte yorumlar kapalı
Artem နည်းပညာ, အီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးစနစ်များ 15 2006 အတွက်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းများနှင့်အတူယခုနှစ်အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်ယနေ့ထံမှ 2006 နှစ်ပေါင်းအီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးစနစ်များအတွက်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Artem နည်းပညာ, အီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးကိရိယာများ [ပို ... ]
ရထားလမ်း Cluster Anatolia
06 / 02 / 2019 Levent Elmastaş Cluster များအတွက် Anatolia ရထားစနစ်များ yorumlar kapalı
အခြေခံမူ Anatolian မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် (ARUS) Cluster, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံး Non-ဒေသတွင်းနှင့်စပျစ်သီးပြွတ် Anatolia ၏မြေတပြင်လုံးကိုဖုံးအုပ်ထား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်, supporting အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စေ့စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းထွက်သတ်မှတ်ထားသည့် "ရထားစနစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်" [ပို ... ]
Prysmian Group မှ
06 / 02 / 2019 Levent Elmastaş Prysmian yorumlar kapalı
Turk Prysmian ကြေးနန်း & စနစ်များ Inc မှ။ ယနေ့တူရကီအတွက် Prysmian Group ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူစွမ်းအင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်လ်ကြိုးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာကုမ္ပဏီ, Mudanya (Bursa) တွင် 1964 နှစ်ပေါင်းတည်ရှိသည်ကတည်းကများနှင့်စုစုပေါင်း 180.000 m²ပြင်ပတွင် [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş သံများအတွက် TR yorumlar kapalı
16.000 နှင့်အတူ Manisa အနက်ရောင်စသည်တို့ကိုခေတ်သစ်စက်ရုံ OSB, သံမဏိ, လူမီနီယံ, Hardox, m²ကမ္ဘာ၏စီမံကိန်းကို-based ထုတ်ကုန်လိုင်းဧရာမယ့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း "မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်" တာဝန်ထမ်းဆောင်အဖြစ် T ကသံ Inc ကိုထုတ်လုပ်ဘို့သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်းကနေထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş T ကမှ yorumlar kapalı
Tamek အထူးသဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်, 1988 အတွက်ယနေ့သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုဖြတ်တောက်ခြင်း tools များတည်ထောင် Holder အသင်းများအပါအဝင်နှင့်တူရကီအတွက်တူရိယာ, အမေရိကနှင့်အရှေ့ဖျားဒေသ 35 အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းတာခြင်းအဓိကဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်အစအဦးကတည်းက 2002 [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş ဆောက်လုပ်ရေးအဘို့အပနျးရနျသမား yorumlar kapalı
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများကိုနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျတစ်ဦးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဝင်. 1993 TAŞÇIဖှဲ့စညျး machine, LTD ရှိထားပြီး 2003 နှစ်ပေါင်းခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထပ်နာမည်, သူသည် ထိုအချိန်မှစ. ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများအောင်မြင်စွာဆက်လက်သိရသည်။ abstraction machine ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များ၏ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş Staubli များအတွက် yorumlar kapalı
Staubli, အထည်အလိပ်စက်တွေ, ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီပါဝင်သောအရည်များအဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံသုံးခုနဲ့အမြန် couplers နှင့်စက်ရုပ်စက်မှုလျှပ်စစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ။ ယနေ့တွင်Stäubli 4500, အုပ်စုကုမ္ပဏီများသည်Schönherr Multi-ဆက်သွယ်ပါနှင့် Deimon အတွက်5တိုက်ကြီးကျော်တစ်ဦးလုပ်သားအင်အားနှင့်အတူ [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş ကာဗွန်ပျင်းစရာ yorumlar kapalı
ကာဗွန် SKC, ကာဗွန်နှင့်ဖိုက်၏လျှပ်စစ်, စက်မှုနှင့်စက်မှု applications များအသုံးပြုစက်မှုအဆောက်အဦမှမရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း, လက်ရှိစက်ပစ္စည်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများတာဝန်ထမ်းဆောင်။ တူရကီ, ကာဗွန်-ဖိုက်လျှပ်စစ်ကိုယ်စားပြုမှု SGL Carbon ကို GmbH- (အထူးခဲနက်ရောင်စီးပွားရေးဧရိယာ) ဆောင်ရွက်ထားပါတယ် [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş စက်များအတွက် Pete yorumlar kapalı
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ Pete Makina 1963 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ မော်တော်ကားဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းကိရိယာစတင်ဖွဲ့စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်တဦးကတည်းက။ ရထားလမ်းကိုလည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အထူးပြုသည်။ အဆိုပါရထားလမ်းပစ္စည်းကိရိယာများမှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အာဏာ၏ဒီဇိုင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားစီမံကိန်းအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်း 26.000 mxnumx [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş ရော်ဘာအဘို့ကိစ္စ yorumlar kapalı
ရော်ဘာ 1982 လည်းကျွမ်းကျင်သူဝန်ထမ်းနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာနည်းပညာများနှင့်အတူ၎င်း၏အလေးနှင့်အရည်အသွေးသက်သေပြကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ xnumxm²နှစ်စဉ်ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှု 1000 Tone ဖြင့် Ostim ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံxnumxm²မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအာကာသ [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş Otaki များအတွက် yorumlar kapalı
2004 အတွက် OTAM, အဆိုပါ OSD နှင့်အတူ ITU ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် TUBITAK မိတ်ဖက်; ဗဟိုစမ်းသပ်နှင့်တည်ဆောက်ခြင်း, Pre-ထုတ်လုပ်မှု R & D နဲ့ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တက္ကသိုလ်-စက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်း, မော်တော်ကားကဏ္ဍမှာအာူးအဆိုပါလက်မှတ်၏လုပျငနျးထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ [ပို ... ]
26 / 01 / 2019 Levent Elmastaş ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဘို့အ Ostim yorumlar kapalı
ဒါဟာ 1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမျှဝေသူကို multi-မိတ်ဖက်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ကုန်သွယ်နေကြသည်။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်ဦးကကြီးမားသောအရေအတွက်ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူပေါင်းစည်းအလုပ်လုပ်နှင့်စီမံကိန်း၏စက်မှုနှလုံး Ostim အတွက်ထုတ်လုပ်နေကြပြီး [ပို ... ]
25 / 01 / 2019 Levent Elmastaş OSB များအတွက် Ostim yorumlar kapalı
1998 အဓိကကဏ္ဍများတွင်, 4562 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သောင်းချီကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏, ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်၏ status ရရှိခဲ့နှင့်5အမှတ်ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်OSTİM၏လုပျငနျး 17 သန်းစတုရန်းမီတာအတွက်, မြို့တော်ဥပဒေအရတူရကီကောက်ယူတော်မူကြောင်းကို 139 နှစ်5[ပို ... ]
25 / 01 / 2019 Levent Elmastaş အီလက်ထရောနစ်တွင် yorumlar kapalı
1991 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး high-tech ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက LED Display ကိုစနစ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ခြုံငုံစက်မှုလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်စနစ်များအတွက် R & D, စီမံကိန်းကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, ဝန်ဆောင်မှု, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အကြံပေးအလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ [ပို ... ]